Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, December 15, 2009 Tuesday, December 15, 2009 Labels: လူမှုရေးရာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘ၀မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတိတ်တွေ ကနေ ရရှိခဲ့တဲ သင်ခန်းစာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါ လိမ့်မယ်.. အရွယ် ရောက်လာတဲ့ထိ တစ်ချို့ သင်ခန်းစာ တွေဟာ မေ့ပျောက်လို့ မရနိုင်အောင် စိတ်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ကျန်နေခဲ့တာမျိုး ခင်ဗျားတို့ ကြုံဖူးကြရဲ့လားမသိဘူး.. ကျွန်တော့်ဘ၀မှာတော့ မမေ့နိုင်တဲ့ သင်ခန်းစာလေးတစ်ခု ရှိခဲ့တယ်ဗျာ…..
ကျွန်တော် မူလတန်း ကျောင်းသား အရွယ်ကပေါ့…
တစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်နဲ့ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့ အကြီးအကျယ် အငြင်းအခုန် ဖြစ်ကြတယ် …. ဘာအကြောင်းအရာ အတွက် အငြင်းအခုန် ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့ပေမဲ့ အဲဒီကနေ ရခဲ့တဲ့ အသိလေးတစ်ခု ကတော့ ဒီနေ့ထိ ကျွန်တော် မေ့လို့မရခဲ့တာ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ပါဘဲဗျာ…
အဲဒီသူငယ်ချင်းကလဲ သူမှန်တယ် ကျွန်တော်မှားတယ်….. ကျွန်တော်ကလဲ ကျွန်တော်မှန်တယ် သူမှားတယ်နဲ့ အပြင်း အထန် အငြင်းပွားနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်လုံးကို အတန်းပိုင်ဆရာမက အတန်းရှေ့ကို ခေါ်ထုတ် လိုက်တယ်….. ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ စားပွဲ တစ်ဖက် တစ်ချက်မှာ ကျွန်တော်တို့ကို ရပ်ခိုင်းတယ်.. ကျွန်တော်က စားပွဲရဲ့ ဘယ်ဘက်၊ သူက ညာဘက်ပေါ့.. ဆရာမရဲ့စားပွဲ အလယ်တည့်တည့်မှာတော့ လုံးလုံး ၀ိုင်းဝိုင်းနဲ့ အရာ ၀တ္ထု တစ်ခု ရှိနေတယ်… အရှင်းဆုံးပြောရရင် ဘောလုံးတစ်လုံး လိုပါဘဲ…
ကျွန်တော် မြင်နေရတာကတော့ အနက်ရောင် ထင်ထင်ရှားရှားပါဘဲ.. ဆရာမက ကျွန်တော့် အတန်းဖော်ကို အရင်မေးတယ်… ဒီဟာက ဘာအရောင်လဲ တဲ့ ..ဟိုကောင်ကလဲ ” အဖြူရောင် “ တဲ့ ပြန်ဖြေတယ်.. ကျွန်တော် တော်တော် အံ့သြသွားတယ် … ယုံတောင် မယုံချင်ဘူး ….. ဒီလောက်တောင် အနက်ရောင် ထင်ထင် ရှားရှား ရှိနေတာကိုတောင် ဒီကောင်က အဖြူရောင်လို့ ဖြေရလားပေါ့.. ကျွန်တော် တွေး လိုက်မိတယ်.. ငါတို့ ၂ ယောက် ကြားမှာ ဒီတစ်ခါလဲ အရောင်ကြောင့် အငြင်းအခုန် ဖြစ်ရပြန် ဦးတော့မယ်လို့…
ဒါပေမဲ့ ဆရာမက ကျွန်တော်တို့၂ယောက်ကို နေရာချင်း ပြောင်းဖို့ ပြောတယ်…. ဟိုကောင်က ကျွန်တော့ နေရာ လာရပ်တယ်.. ကျွန်တော်က စောစောက သူရပ်နေတဲ့ နေရာမှာ သွားရပ်တယ်.. ဆရာမက ကျွန်တော့်ကို မေးတယ် ဘာအရောင်လဲတဲ့ ..ကျွန်တော် ဖြေလိုက်ပါတယ်..
မှန်ပါတယ်… အဲဒီအရာဝတ္ထုလေးဟာ အခု ကျွန်တော်ရပ်နေတဲ့ နေရာကနေကြည့်ရင် တကယ့်ကို အဖြူရောင်ပါ… အမှန်တော့ တစ်ဘက် တစ်ချက်စီ အဖြူနဲ့ အမဲ အရောင်၂ရောင်ဆိုးထားတဲ့ အလုံးကြီး တစ်ခုပါ.. ကျွန်တော် ရပ်နေရာက ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဖြူရောင်ကို မြင်နေ ရပြီးတော့ သူရပ်နေတဲ့ နေရာက ကြည့်မယ်ဆိုရင် အနက် ရောင်ကို တွေ့ရတာပါ…
အဲဒီမှာ ကျွန်တော့် အတန်းပိုင်ဆရာမက ကျွန်တော့်ကို အကောင်းဆုံး သင်ခန်းစာ တစ်ခုကိုပေးခဲ့တာပါ… ပြဿနာ တစ်ခုကို မဆုံးဖြတ်ခင်၊ အဖြေမရှာခင်မှာ ကိုယ့်ဘက်က တစ်ခုတည်းကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ဖို့နဲ့ တစ်ခြားသူ တစ်ဦးရဲ့ နေရာကနေ ၀င်ကြည့်ပြီး တစ်ဘက်လူရဲ့ အမြင်နဲ့ ခံစားချက်ကိုပါ ကိုယ်ချင်း စာကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့ ဆရာမ ပေးခဲ့တဲ့ အကောင်းဆုံး သင်ခန်းစာပါ… ကျွန်တော့် ဘ၀အတွက် မမေ့နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး သင်ခန်းစာ ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူးဗျာ…
ကျွန်မတို့တွေကရော ကိုယ်နဲ့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်က အမြင် သက်သက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဖူးပေါင်း များခဲ့ကြမှာပါ…. ကိုယ့်တစ်ဘက်လူရဲ့ ခံစားချက်ကို သူ့နေရာကနေ ၀င်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာ ဖူးပါရဲ့လား.. ခံစားဖူးကြပါရဲ့လား… ပြဿနာတစ်ခုကို ကိုယ့်အမြင် တစ်ခုတည်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမနဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်တောင် များပြီလဲ… လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်စိတ်၊ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုသာ ဦးစားပေး တတ်ကြသူများမို့ တစ်ဘက်သားရဲ့ အမြင်ကို အလေးအနက် ထားတတ်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့လွယ်မယ် မထင်ပါဘူးနော်.. ဒါပေမဲ့ ဘက်၂ဘက်ကို မျှမျှတတ ကြည့်တတ်ဖို့ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစား ကြည့်ကြပါစို့လားရှင်…..
http://www.funzug.com/stories/black-white-story.html မှ ဘာသာပြန်ပါသည်…
No response to “အဖြူနဲ့အမဲ”